Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tanàn-dehibe amerikana tsara indrindra hahitana ny Apokalipsy Zombie
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Kolontsaina • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tsarovy: raha sendra zombie tena izy ianao dia tendreo ny lohany!
Aiza ny velona no manana vintana tsara indrindra hiarovan-tena mandritra ny fikomiana zombie?
Surf City USA dia mihoatra ny tanànan'ny morontsirak'i California eo ho eo fotsiny.
Ny ankamaroan'ny tanàna any amin'ny farany ambany amin'ny laharam-boninahitra dia avy any Andrefana.
Nilaza izy ireo fa tsara kokoa ny loha roa noho ny iray, ary azo antoka fa marina izany raha ny manapotika ny melon zombie no resahina.
Bibikely ny taona lasa - tsy nampoizina loatra - fa inona no mety ho ratsy kokoa? Zombies.
Ahoana no hahatafita anao amin'ny apokalypsy zombie? ny Nandinika an'io lohahevitra io ny CDC, na eo amin'ny takolaka-amin'ny-zombie-lela.
Saingy amin'ny tranga (tsy ampoizina?) Amin'ny fikomiana zombie, aiza no ialan'ny velona ny tsara indrindra hiarovany tena?
Notarihin'ny Toro-làlana Zombie Preparedness 101 an'ny CDC, nandavaka tao am-pasana ny angon-drakitra mba hametrahana ny tanàna 2021 tsara indrindra hiarovana ny Apokalipsy Zombie.
Ny laharana dia nampitaha ny 200 lehibe indrindra US tanàna misy mari-pamantarana 23 amin'ny fahavononan'ny zombie - manomboka amin'ny anjaran'ny mponina salama ara-batana hatrany amin'ny ampahan'ny trano misy miaraka amin'ny lakaly mankany amin'ny fidirana mihaza.
Zahao ireo tanàna 10 tsara indrindra (sy 10 ratsy indrindra) hiadiana amin'ny tsy maty etsy ambany, arahin'ireo fanasongadinana sy jiro vitsivitsy avy amin'ilay tatitra.
Tanàna tsara indrindra tamin'ny 2021 mba hahavelona ny Apokalipsy Zombie
2 Bellevue, NY
7 Md Paul, MN